रामजानकी रगंशालाकाे लागि हनुमानको रुपमा काम गरिरहेको छु : दिनेश पुर्वे
२०७५ पौष ४ बुधबार २०:३३:००
दिनेश पुर्वे यस्तो नाम हो जसले इतिहासमा अमर हुने कार्य गर्दै आएका मधेशका चर्चित ब्यक्तित्व हुन्। जसले पछिल्लो समय जनकपुर मिथिला, मधेश र नेपाल नै गौरव हुने कार्य गर्दै आएका छन्। पुर्वे यस्तो अभियन्ता हुन् जसको हर्षको दिन जनकपुरमा बित्यो र पीडाको दिन अरबको खाडीमा पनि दिन विताएर पुनः आफ्नै देश फर्केर खेलकुद विकासको माध्यमबाट देशलाई अन्तराष्ट्रिस्तरमा चिनाउँन रगंशाला निर्माणका लागि अथक प्रयास गरेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अशः
दिनेश जी आज तपाईले आँफुलााई वर्तमानमा के भन्न रुचाउँन चाहँनुहुन्छ ?
खास वर्तमान समयमा म समाजिक अभियान्तको रुपमा चिनाउँन चाहँन्छु। आज मलाई गौरवान्वित भइरहेको छ। आफु जन्मेर मातृभूमिको लागि केही गर्न खोजिएको र त्यसको प्रयास थालिएकोमा सफलतातिर उन्मुख भइरहेकोले आफ्नो विगत विर्सेर वर्तमान तिर म अग्रसर छु।
वर्तमानमा तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
वर्तमानमा म खास गरी राम जानकी रगंशाला सीताराम विवाहको प्रतिक स्वरुप निर्माण गर्ने योजना अनुसारअघि बढाइरहेको छु। जसरी यसले हामीलाई एउटा विश्वको मानचित्रमा चिनाउँन ठुलो सहयोग गर्नेछ । यो खेलको प्रतिक सीताराम विवाहको धनुष आकारमा संसारकै एउटा अकार्षणको केन्द्रविन्दु बन्ने अन्तराष्टिय रगंशाला हुनेछ।
रगंशाला निर्माण गर्ने कार्यमा अहिले के प्रगती भएको छ ?
वि.सं. २०६६ सालमा रगंशाला बनाउने कार्य प्रारम्भ गरियो। त्यसपछिको कालखण्डमा विभिन्न चुनौतीहरु पार गर्दै २०७४ सालमा त्यसको लागि जग्गा प्राप्ती भयो । जग्गा प्राप्ती सँगै नेपाल सरकारले रगंशाला निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनायो। त्यस्तै यसमा प्रदेश नम्बर २ को सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि समर्थन जनाएको हो।
वास्ताविक रुपमा प्रतिबद्धता र समर्थन बाहेक अरु के कस्तो कार्य प्रगती भएको छ ?
पहिलो राम जानकी रंगशाला एकेडेमी स्थापनासँगै बजेट विनियोजितसमेत भएको र राम जानकी इन्टरनेशनशल रंगशाला कम्लेक्स अन्तरगत अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बाहु उद्देश्यीय अन्तराष्ट्रिय रंगाशाला निर्माण अन्तरगत अढाइ करोडको टेन्डर आह्वानसमेत भएको छ। जसमा कम्पाउन्ड वाल, दरबारकोे संकेत र धनुष आकारमा गेट निर्माण ,कार्यालय निर्माण, गार्ड हाउँसको निर्माण गरिनेछ। जसमा प्रदेश सरकारले समेत २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यसको अनुमानित लागतको सम्बन्धमा सरकारले साढे ६ अर्वको इस्टिमेट बनाएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता सहयोग पाउँनु भएको छ?
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहयोग जुटाउने प्रक्रिया सरकारले अगाडी बढाएकोे छ । हालै संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री ज्यूँ मार्फत भारतका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष राम जानकी अन्तराष्टिय रगंशाला धनुष आकारमा निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। जग्गा ब्यवस्थापनदेखि लिएर योजना स्वीकृतीसम्मको अभियान्तको रुपमा कार्य भएको हो। अर्को अर्थमा म राम जानकी रगंशाला निर्माणको लागि हनुमानको रुपमा काम गरिरहेको छु।
जनकपुर र मधेशको लागि यो रंगशाला कसरी उपयोग हुनेछ ?
यसलाई अन्तराष्ट्रिय स्पोर्ट हब बनाएर जनकपुर र मधेशलाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटकिय स्थलको रुपमा चिनाउँदै राष्टको गौरव बढाउने योजना छ।
अन्तिममा तपाइ के भन्न चाहनु हुन्छ?
यसमा हामी सबैको सहयोग र सदभाव हुनेछ। सबैलाई गौरवान्वित महसुस हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।